Xiddig Liverpool Ah Oo Wadne Xanuun Kusoo Booday, Cusbitaalka Loola Caray Iyo Farriinta Qiirada Leh - GOOL24.NET
Xiddig Liverpool Ah Oo Wadne Xanuun Kusoo Booday, Cusbitaalka Loola Caray Iyo Farriinta Qiirada Leh
Xiddig ka tirsanaa Liveprool ayaa loola cararay cusbitaal kaddib markii uu kusoo booday wadne xanuun, waxaana farriin qiiro leh kaga hadashay xaaladdiisa xaaskiisa uu qabo.
Mark Gonzalez oo Liverpool uga ciyaari jiray garabka weerarka ayaa la dhigay cusbitaalka iyadoo ay da’diisu tahay 36 jir, waxaana lala tacaalayaa xaaladdiisa oo hadda la sheegayo inay kasoo raynayso.
Sida uu qoray wargeyska AS ee kasoo baxa waddanka Spain, Mark Gonzalez oo ku sugnaa waddankiisa Chile ayaa laga qabtay wadnaha, waxaana si degdeg ah loo dhigay cusbitaalka.
Xaaska uu qabo laacibkan oo lagu magacaabo Maura Rivera ayaa farriin ay ku daabacday barteeda bulshada ee Instagram waxay taageereyaasha kula wadaagtay sida ay tahay xaaladda caafimaad ee laacibkan hore.
“Jacaylkii noloshayda, ruuxdii igu lammaanayd, alla maxaad naxdin igu abuurtay.” Ayay Maura Rivera ku tidhi qoraalka ay soo dhigtay barteeda.
“Habeennadii yara aee tegay waxay ahaayeen kuwo adag. Waxay ahaayeen maalmo hubanti la’aan ah iyo naxdin dhab ah.
“Waxaan u qorayaa farriintan maadaama aad wali halkan joogo, xoogaana aad soo fiicnaanayso, iyo sababtoo ah in aad siyaabo badan oo kale nagula joogto, waqti walba oo aynu wada qaadano aad naga farsiso, qoys ahaan iyo midda ugu mudan oo ah nolosha laf ahaanteeda.
“Waa layaab sida waqti kooban ay wax walba iskugu beddeli karayaan.
“Noloshu way naga yaabin kartaa, waxaanay nagu noqon kartaa imtixaan iyadoo naga nixinaysa laakiin haddana samir, adkaysi iyo rajo ayaynu dhamaanteen kaga gudbi karnaa waqtiyada xun-xun.
“Waxa aan doonayaa in aad waligay ila joogto, Mark.” Ayay kusoo gabogabaysay qoraalkeeda.
Gonzalez ayaa Liverpool kusoo biiray October 2005, laakiin markii uu awoodi waayey inuu boos joogto ah helo iyo inuu saldhigo, waxa amaah loogu diray Real Sociedad, kaaddibna wuxuu dib ugu soo laabtay Anfield xagaagii xigay, waxaana 36 ciyarood oo uu saftay uu u dhaliyey saddex gool ak hor intii aanu si rasmi ah ugu biirin kooxda reer Spain ee Real Betis sannadkii 2007.